Yusuf Garaad oo banaanka soo dhigay arrimo mugdi ku jira kuna saabsan dacwadda Badda! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Yusuf Garaad oo banaanka soo dhigay arrimo mugdi ku jira kuna saabsan...
Yusuf Garaad oo banaanka soo dhigay arrimo mugdi ku jira kuna saabsan dacwadda Badda!
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar ayaa si kulul uga hadlay Arrimo mugdi ku jiro oo ku saabsan dacwada Badda, isaga oo dhaliilay qaabka dowladda Soomaaliya u maamuleyso Kiisma Dacwadda Badda.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in markii hore Guddi Farsamo iyo Qarreeno ay matali jireen Soomalaiya,hayeeshee markii ugu horeysay uu siyaasi qeyb ka noqdo ay tahay.
Halka hoos Ka Akhriso Qoraalka Yuusuf Garaad:
arrimo mugdi ku jiro
Kiiska badda Somaliya iyo Kenya
ku saabsan dacwadda badda